ဒသန မဟုတ်တဲ. ကျွန်တော်ရဲ. အတွေးစိတ်ကူး... (၁) | LAMINTAYAR
Posted by lamintayar at 7:04 AM Labels: ရေးမိရေးရာ အတွေး တချို. .....
ဒီနေ.အလုပ်လဲနဲနဲပါးတာ နဲ.ထိုင်နေရင်း ဟိုတွေးဒီတွေးပေါ. ဘာလဲဆိုတော. တနေ.တနေ. အလုပ်သွားအလုပ်ပြန် စဉ်းစားကြည်.တော. မွန်းကျပ်လာတယ် ..မနက်ဆိုလဲမထချင်ပဲနေလို..မရ ဘဝပေးတာဝန်အရ အ်ိပ်ကောင်းလဲမအိပ်ရပါလားပေါ.နော် တော်တော်လေးညဉ်းမွေ.တယ် အရင်ဆိုအိမ်မှာ နေဖင်ထိုးအောင် အိပ်လဲအကြောင်းမရှိ စားစရာအသင်. ပြီးပြည်.စုံနေတာပဲ .....
မိဘနဲ.လဲအတူ ကျွန်တော်ချစ်သောမေကြီးလဲရှိ လိုချင်တာရှိရင် ကပ်ပြီး ချွဲ အော် ....အခုတော. အားလုံးနဲ.ဆန်.ကျင်.ဘက်တွေပါလား .....ပျော်ရာမှာမနေ တော်ရာနေဆိုသလိုပေါ. ကိုယ်.ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် ကိုယ်လျောက်လှမ်းနေကြရတာပဲလေ....။
လူတိုင်းချမ်းသာချင်ကြတာပဲ မချမ်းသာချင်ဘူးဆိုတာရှိလား မရှိပါဘူး အပြောပဲရှိတာပါ..တကယ်လက်တွေ.မှာ ဘယ်သူ.မှ အဲ.လိုမရှိပါဘူး ဦးမျိုးကျော.မြိုင်ဆိုသလိုပေါ. လူဖြစ်ရတဲ. ဒုက္ခ ဆိုတာဒါဘာပဲ ...အချစ် မေတ္တာ သံယောဇဉ် အကြင်နာ ဂရုနာ ချမ်းသာချင်တာ အောင်မြင်ချင်တာ ကျော်ကြားချင်တာ အားလုံးစုံလို.ပါပဲ ဒါတွေဟာ လူဖြစ်ရတဲ. ဒုက္ခတွေပေါ. လူရယ်လို.ဖြစ်လာမှတော. ဘယ်သူမှရှောင်လွဲလို.မရပါဘူး ....။
တည်.တည်.ကို ရင်ဆိုင်ရမယ်. ကိစ္စတွေပါပဲ ကျွန်တော်လဲ ထိုဒုက္ခတွေနဲ. ရင်ဆိုင်နေရတဲ.လူသားတစ်ဦးပါပဲ ချမ်းသာချင်တော. နှိင်ငံခြားထွက် တော်ရာမှာနေရမယ်လေ မြန်မာပြည်မှာသာဆို ဘာမှလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး ပြီးတော. ကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်တွေကလဲ နှိင်ငံခြားမှာပဲရှိတာကိုး ....။
ဒီမလာခင် ကျောင်းပြီး အစိုးရ ဝင်ထမ်းလုပ်ဖို. ဖေဖေက နှိုးဆော် မေမေ ကဖျက်တာနဲ. အခုတော. အဲ.တာတွေဟာ မလုပ်ဖြစ်ခဲ.တာ အမှန်ပဲ ကံကောင်းတယ်မှတ်ရမယ် ရယ်ဖို.လဲကောင်းတယ် "ဝန်ထမ်း." လစာတပဲခြောက်ပြားနဲ. လာဘ်စားလာဘ်ယူ လုပ်မှ ပိုက်ဆံရ အဲ.လိုလုပ်တော. လူမုန်း မသထာရေစာ ဟားးး..။ ကျေးဇူးပါမေမေ .....
အဲ.ဒီဝန်ထမ်းသာလုပ်ဖြစ်မယ်ဆို ရေအိုင်ငယ်ထဲက ဖားသူငယ်လို ကမ္ဘာကြီးကဘာလဲဆိုတာမသိဖြစ်နေမှာ ဝန်ထမ်းဆိုတဲ.ဘောင်ထဲမှာပဲ နေတော. အိုတဲထိတိုင် အခုတော.ကံကောင်းတယ်မှတ်ရမယ် ကျွန်တော်လဲစိတ်ကူးမရှိပါဘူး မရှိပေမယ်. ယိမ်းယိုင်ခဲ.သေးတယ် အဲ.ဘက်ကို ဖေဖေ ရဲ.အဆွယ်ကောင်းမှု.ကြောင်.ပေါ. အရာရှိကြီး ဖြစ်ရမယ် ဘယ်လိုဘယ်ဝါ အခုတော.အမုန်းဆုံးက အဲ.တာတွေပေါ. .....။
အခုတော.ရာက်တဲ.နေရာမှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်နေပြီလားဆိုတော. မဖြစ်သေးပါဘူး ၁၀ ပုံ မှ ၂ ပုံလောက်ပဲရှိသေးတယ် အများကြီးလိုအပ်သေးတယ် ဒီရောက်တော.တကယ် နောင်တရမိတယ် ငယ်ငယ်က စာကောင်းမွန်စွာ မကြိုးစားခဲ.လို သာမာန်ဘွဲ. တခုရ သိမ်လဲသိမ်ငယ်မိတယ် သူများတွေ IT . ENGINEERING တွေနဲ. NUS . NTU . POLY တို.လို ကျောင်းတက်နေတဲ.လူတွေ တွေ.တော. တကယ် အရမ်းသိမ်ငယ်မိတယ် ကိုယ်မှမကြိုးစား ခဲ.တာပဲလေ ငယ်ငယ်က စာကျက်ပါဆိုတော. မကျက်ပဲနဲ. ဒီလောက်လုပ်တော.ဒီလောက်ပဲရမှာပေါ. ဆိုပြီး ကိုဘာသာပြန်တွေးရင်းဖြေသိမ်. ရတယ်.......။
ဒါပေမယ်. ကျွန်တော်စဉ်စားမိတယ် ပညာမတတ်ပဲ ချမ်းသာနေတဲ.လူတွေလဲ တပုံကြီးပါလားပေါ. ဥပမာအနေနဲ. ကျွန်တော်.အဒေါပဲ ကြည်. ကြွားတာမဟုတ်ပါဘူး ကြုံတုန်း ကျွန်တော်.ရဲ.အရင်နှီးဆုံး လူတစ်ဦးအနေနဲ. ပြောပြတာပါ သူဆို သူတို.ခေတ်က နှီင်ငံရေးအခြေအနေကြောင်. ကျောင်းမတတ်ရပဲ လျောက်ပြေးနေရတာ ၄တန်းအောင် အဲ.တာပဲရှိတာပါ သူဆို အခုအိမ်မှာ ကား ၅ စီးရှိတယ် အလုပ်က သူပဲလုပ်တာအရာရာကိုသူပဲ ကိုင်တယ် သူယူတဲ.ယောက်ျားက အိမ်မှာ ထိုင်စားထမင်းချက် ကျွန်တော်.အဒေါက ဘဝကို ပိုက်ဆံ ၆၀၀၀ နဲ.စခဲ.တာပါ .....။
အလုပ်နဲ.ပတ်သတ်လို.လဲဘာမှမသိခဲ.ဘူး ကျွန်ေတာ်ဖေဖေက သင်ပေးတယ် အဒေါကိုယ်တိုင်ကလဲ ပြတ်တယ် အရာရာကို ဆွေမျိုး တွေကိုကအစ အဲ.လို စာရင်းဇယားကတော.နှိင်သလားမမေးနဲ. အဒေါကမေမေ အောက်ပါ မေမေကအကြီးဆုံး သူ.မှာ စာရင်းစာအုပ်ကအနည်းဆုံး ၁၂ အုပ်လောက်ရှိတယ် ဒါပေမယ်. သူတတ်တာက ၄တန်းအောင် လက်ရှိ သူရှိတဲ.ငွေကြေး နဲ. သူ.ပညာအရည်အချင်းနဲ. ဆိုင်လားဆိုရင် တခြားစီပဲ ကံကောင်းလို. ချမ်းသာတာလို.ပြောရင် ကံကိုယုံပြီး ဆူးပုံနင်းရင် မဆူုးပဲနေမလား မဆိုင်ပါဘူး .....။
လူတွေမှာမွေးကတည်းက ခေါင်းတလုံး လက်နှစ်ဘက် ခြေနှစ်ချောင်း ဘုရား က ဖန်ဆင်းပေးပြီးသားပါ လူတိုင်းမှာကြိုးစားနှိင်.ခွင်.ရှိတယ် ဒုက္ခိတ ကလွဲလို.ပေါ. ဒုက္ခိတ တောင်မှ အခုကျွန်တော်နေတဲ. အိမ်ဘေးက ဦးလေးကြီးဆို မျက်စိမမြင်ဘူးနော် ဒါပေမယ်. သူ.ကိုဘယ်သူမှ လိုက်ထိန်းပေးစရာမလိုဘူး လမ်းလျောက်တာမှ လူကောင်းတဦးပဲ တောက်တောက် နဲ.ကို လျောက်နေတာ ကားပါစီးသေးတာ ဒုတ်တချောင်းတော.ပါတယ် အဲ.တာနေ.တိုင်း အပြင်ထွက်တာနော် ဘယ်သွားတာလဲမသိဘူး .......။
အဲ.တော.ဒုက္ခိတ လို မျက်စိမမြင်တဲ. လူတစ်ဦးတောင် သူ.ဘဝသူအရှံး မပေးဘဲ နေတိုင်း ကို အပြင်ထွက်နေတယ် စိတ်ဓာတ်မကျ ဘူး လူကောင်းအတိုင်း နေတယ် အာာာာာာာာာာ.....ငါ မျက်စီမမြင်ပါဘူး ဆိုပြီးအိမ်ထဲမှာပဲမနေဘူး စကာင်္ပူလို ကားတွေလူုတွေရှုပ် တဲ.နှိင်ငံမှာ သူဟာ ဘာမှမကြောက်ပဲ လျောက်သွားနှိင်တယ် နေ.တိုင်း ဒါဟာ သူ.ရဲ.လုပ်နှိင်စွမ်းလေ သူကို.အလုပ်ခန်.ပြီး ခိုင်းမယ်ဆိုတာတော.မဖြစ်နှိင်ဘူးလေ သူသွားနေတာလူကောင်းတစ်ဦးလိုဆိုတာ တကယ်ကိုချီးကျူး အတုယူစရာပါ အတုယူတတ်မယ်ဆို တကယ်အားတတ်စရာပါ ကိုယ်တွေ လူကောင်းတယောက် ကဘာလို.မဖြစ်နှိင်ဘူးဆိုတာရှိရမှာလဲ.......။
လူတိုင်းမှာအခွင်.အရေးတွေရှိနေတယ်လို. ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် အဲ.ဒီအခွင်.အရေးတွေကို မသိနားမလည် အသုံးချရမှန်းမသိ တထွာလောက်ပဲကြည်.ပြီး ဟိုးအဝေးကိုလှမ်းမမြင်တဲ. အမြင်ဆိုရင်တော. လူ.ဘဝဟာ အဆုံးရှုးံ ကြီး ဆုံးရှုးံ မယ်လို.မြင်မိတယ် လူတွေ တချို.က ငါဟာပညာမတတ်လို. ဆင်းရဲတာ ငါဟာငါ.မိဘ မျိုးရိုးဟာ ဆင်းရဲလို.ဆင်းရဲနေတာ ငါလဲဆင်းရဲတာ ဘာထူးမှာလဲ ဆင်းရဲမှာပေါ. ဆိုရင် အဲ.လိုပဲခံယူနေမလား ငါဟာ ကြိုးစားရမယ် ဘယ်လောက်ဆင်းရဲခဲ. ပညာမတတ်လို.ပဲဖြစ်ဖြစ် မိဘ အသိုင်းအဝိုင်းကမချမ်းသာလို.ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုမလုပ်ရင်ဘာမှ မဖြစ်လာပါဘူး......။
လူတိုင်းမှာ တွေးဆ ဖို. ဦးဏှောက် လုပ်ဖို.အတွက် လက်တွေရှိနေ သမျှ သင် မအိုသေးသမျှ အခွင်.အရေးတွေရှိနေတယ် လို.ထင်ပါတယ် ......မအိုသေးသမျှဆိုလို. စလုံးလိုချမ်းသာတဲ.နှိင်ငံမှာတောင် အဖွားကြီးတွေဆို အချိုရည်ဗူး ခွံတွေကောက် စက္ကူ ဗုံးခွံတွေ ကိုလွှင်.ပစ်မယ်. နေရာမှနေ.တိုင်း စောင်. ကောက်လေ.ရှိတယ် သူတို.အတွက် ဒီငွေဟာ ဒီနေရာက နည်းနည်း ၂ဒေါလာလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ.လိုနေရာ ၅နေရာလောက်ကို သူစောင်.ဆိုင်းကောက်နှိင်တယ်ဆို ဒေါလာ၁၀ ဆို သူဟာ တနေ. စာလောက် ဈေးဖိုးကို သက်သက်သာသာ နဲ.ရနှိင်တယ်လေ ပြောချင်တာက အဲ.လိုသက်ကြီးရွယ်အို တွေတောင်မှ မနေ ငါအိုပြီပဲ ဆိုပြီးမနေဘူး ကျွန်တော်တို.လူငယ် လူရွယ် စွမ်းအင်အပြည်. အားအင်အပြည်နဲ. ကြိုစားနှိင်တဲ.အချိန်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်နှိင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို. ယုံကြည်ထားတယ်....မြင်မိတယ်အဲ.လို......။
အသက်တွေက လူကိုမစောင်.တာတော.သေချာတယ် ကျွန်တော်လဲအခု ၂၄ ထဲမှာ အတတ်နှိင်ဆုံးနဲ.အကောင်ဆုံးကိုတော. တွေးတော ကြံဆ လုပ်ဆောင်နေတယ် အသက်တွေကြီးမှဆို လုပ်ဆောင်ဖို.အခွင်.အရေးက ၅၀ % လောက်လျော.ကျလာပြီလေ......။
နောက်ပြီး လူတယောက် ရဲ.အသုံးစရိတ်ကို အဝင်အထွက်ကို စာအုပ်နဲ.မမှတ်တောင် အတွေးထဲမှာရှိသင်.တယ်လို.ထင်တယ် စာရင်းဇယားမရှိ တဲ.လူတယောက်က အနားကွတ်မရှိတဲ. ဖျာလို.မြင်မိတယ် အနားမရှိမှတော. တစတစထွက်ကုန်တော.မှာပေါ. ကျွန်တော်ရဲ.အမြင်ပါ ....။
စာဖတ်သူ အရှည်ကြီးဖတ်ရင် ပျင်းလာမှာဆိုးလို. အပိုင်းနဲ.ရေးမယ်လို.စိတ်ကူးလိုက်တယ် ဒါကြောင်. ကျွန်တော်၏ စိတ်ကူးအမြင်လေးများကို မှားသည် မှန်သည်ဝေဖန်အကြံပေးပါဦးလို. မှားတာများလဲရှိရင် ခွင်.လွတ်ပေးပါရန် နှင်. ကျွန်တော်၏ အသက်အရွယ်နှင်. မရင်.ကျက်သေးတာလဲ ပါရင်လဲပါမှာပေါ.နော် သိသမျလေးကို စာမေ၇းတတ် ရေးတတ်နှင်.ေ၇းလိုက်ပါကြောင်းပါ အပိုင်း ( ၂ ) အတွက် ဆက်ရေး ရန် အားအင်လေးများပေးမယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာမိမှာပါပဲ.....ပျော်ရွင်ပါစေ မိတ်ဆွေအပေါင်း ......